Oovimba beSivumelwano seBrexit-Funda ukuRhweba
tag: Isivumelwano seBrexit
Ngo-2020: Igolide eyomeleleyo, iDollar yeWeaker phakathi kwe-COVID-19 Vaccinations, Isivumelwano seBrexit
Ukuhlaziywa: 31 Disemba 2020
Igolide yahlangana kancinci phakathi kokunye ukuwa kwedola, kodwa inkqubela phambili kugonyo ibhlokile ibango leendawo zokuhlala. Ngaphandle kwempucuko yakutshanje kwizitofu ze-COVID, ukwamkelwa kuyadanisa, kwaye iliza langoku libonakala lifuna amanyathelo athintelayo kwezi veki zimbalwa zizayo.
Sele kudlule unyaka ukusukela oko iimeko zokuqala ze-COVID-19 zafunyaniswa eWuhan, China. Ngenxa yentsholongwane, sabona ukuphuma komhlaba okungenakulinganiswa kwikota yesibini, kwalandela irekhodi elibuyela ekukhuleni kwikota yesithathu ngokuqala kweenyanga zehlobo. Ikota yesine iphele ngamaza wesibini nawesithathu. Ngo-Novemba, iziphumo zovavanyo lokugonya lweSigaba 3 zaqala ukufika, kwaye ukuphela konyaka, abasebenzi abaphambili kunye nabo banesidingo babefumana idosi zabo zokuqala.
Ngaphandle kwezimanga ezininzi, iNdlu yeeNkosi yase-UK ivume isivumelwano sokurhweba saseBrexit kwangoko ngoLwesine e-Asiya.
"Isivumelwano sika-Nkulumbuso u-Boris Johnson emva-kwe-Brexit samkelwe yiPalamente yase-UK kwiiyure nje ezingama-24 phambi kokuba ilizwe likhululeke kwi-European Union," Bloomberg uxele.
Isivumelwano saphinde saxoxwa yiNdlu yeeNgingqi, sifumana iivoti ezingama-521 ngokuxhasa i-73 ukuya kwi-73. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iScottish National Party (SNP) iyayichasa le mithetho, esithi, ngokweBloomberg, izakulimaza ishishini lokuloba laseScotland. Kwaye uxelele uJohnson ukuba izakuxhasa ingxoxo exhasa inkululeko.
Idola yaseMelika ebuthathaka ngo-2021
Njengokuba iyeza lokulungisa lilungile kwaye abantu abaninzi bebuyela emsebenzini, isidingo semali yezemali kunye nenkuthazo yemali iyakwehla; Nangona kunjalo, uninzi lweebhanki eziphambili zibonise ukuba ziya kugcina umgaqo-nkqubo wemali oguqukayo kude kube ngu-2021. Idola yaseMelika inokuhlala iphantsi koxinzelelo phakathi kwesiqingatha sokuqala sonyaka kodwa inokunyuka kwikota yesithathu neyesine njengoko i-FOMC inokuthi inyuse ukwanda inzala ukuba ukunyuka kwamaxabiso kunyuka de kube ngu-2022.
Ukubeka nje, idatha yoqoqosho engcono ilingana nenkuthazo encinci. Ukukhuthaza okumbalwa kuthetha ukuba zincinci iidola zaseMelika kwinkqubo. Ngaphantsi kweedola zaseMelika (kunye neemfuno eziphezulu zeemveliso kunye neenkonzo) zithetha ixabiso eliphezulu.
Kwixesha elibekiweyo lenyanga, i-DXY yaphule ngaphantsi komgaqo ophakamileyo ukusukela ngoSeptemba ka-2011. Ukuba eli nqanaba liphukile, qaphela ukubuyiselwa kwe-50% ukusuka ngo-Februwari 2008 ukuya kumanqanaba aphezulu kaJanuwari 2017 njengenqanaba elilandelayo lokuxhasa, malunga ne-87.10. Apha ngezantsi bekukho inqanaba lokubuyisela kwakhona le-50% malunga ne-87.26 kunye nenkxaso ethe tyaba ejikeleze i-84.60.
tags Isivumelwano seBrexit, Covid-19, igolide, KwiDola yaseMelika